Fizotran’ny Tantara: Mpikatroka 14 Voatazona ao Thailandy Noho ny Fanoherana ny Fitondra-Miaramila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2015 6:36 GMT
Ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny Prachatai, tranonkalam-baovao iray mahaleotena ao Thailandy, ary navoaka indray tato ami'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Niteraka fahatafintohinana tao amin'ny firenena ny fisamborana sy ny fitazonana ireo mpikatroka 14 mpanohitra ny fitondra-miaramila ao Thailandy. Nahatonga ireo mpampianatra sekoly ambony hiantso amin'ny famotsorana tsy misy hatak'andro ireo mpikatroka ihany koa izany.
Na dia teo aza ny herijika mety hampigadra fito taona avy ami'ny fitsarana miaramila sy ny fanohintohinana avy ami'ny fitondram-piaramila Thailandey, dia mbola nahasahy nijoro tsy laitra nohozongozonina hitaky ny demaokrasia amin'ny fanoherana ny fitondra-miaramila ireo mpikatroka 14, izay mpianatry ny oniversite, avy ao amin'ny Neo Democracy Movement (NDM) ny ankamaroany.
Tao Bangkok dia niatrika ny famoretan'ny polisy (manao fanamiana miaramila sy manao fanamiana sivily) ireo mpikatroka mpanohitra ny fanonganam-panjakana sy ny mpianatra teo anoloan'ny Foiben'ny Kolontsaina sy ny Zavakanto tao Bangkok (BACC), izay niteraka farafahakeliny olona telo naratra sy nampidirina hopitaly. Nitazona mpikatroka 37 ny polisy taorian'ny fifandonana. Nihoatra ny 100 ny olona nivory teo anoloan'ny komisarian'ny polisy tao Pathumwan tamin'izany ho fanohanana ara-maoraly ireo notazonina. mpikatroka manohitra ny fanonganam-panjakana valo no nampanatsoina hihaino ny fiampangana, saingy iray ihany no nankany amin'ny polisy ary navotsotra rehefa nandoa onitra fanafahana vonjimaika.
Mpianatra tao Dao Din telo no nosamborina sy notazonina noho ny fanoritsoritana hosodoko miaty hafatra manohitra ny fanonganam-panjakana.